အမ်စတာဒမ်သို့ မိမိကားဖြင့် အလည်သွားမည်ဆိုပါက ကားရပ်နားမည့် နေရာဈေးကြီးပါသည်။ မြို့တွင်းရပ်နားပါက တနာရီကို ယူရိုငွေ ၄ ယူရိုပေးရပါမည်။ အကယ်၍ အမ်စတာဒမ်ဘူတာကြီး၏ တဖက်ခြမ်းတွင် သွားရောက်ရပ်နားပါက တနာရီလျှင် ၁.၅ ယူရိုသာ ပေးရပြီး အခမဲ့ ဖယ်ရီတက်စီးလိုက်သည်နှင့် ဘူတာကြီးသို့ ရောက်သွားပေမည်။ အခမဲ့ ထိုဖယ်ရီသည် မိနစ်အနည်းငယ်သာ စောင့်ရပါသည်။ ဘူတာကြီးမှ ထွက်လိုက်သည်နှင့် မြို့လယ်သို့ ရောက်သွားပြီး အလွန်စည်ကားသော အမ်စတာဒမ်ကို စိတ်ကြိုက်လည်ပတ်ပါလေတော့။
ဘူတာကြီးတဖက်ခြမ်း ကားရပ်နားသည့်နေရာ၏ လိပ်စာမှာ IJplein 4, 1021 HR Amsterdam
ဖြစ်ပြီး ခရက်ဒစ်ကတ်ကို အသုံးပြု၍ မိမိရပ်နားလို့သည့် အချိန်နှင့် မိမိ၏ကားနံပါတ်ကို ထည့်သွင်းလိုက်ရပြီးလျှင် လက်ခံဖြတ်ပိုင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကားနံပါတ်ကိုသာ ထည့်သွင်းရပြီး မိမိဝယ်ယူထားသည့် အချိန်ပြလက်မှတ်ထုတ်မပေးသည့်အတွက် ကားပေါ်မှာ မည်သည့်စာရွက်ကိုမျှ ထားခဲ့စရာမလိုပါ။ အမ်စတာဒမ် အပြင် အခြားမြို့ကြီးဖြစ်သော Utrecht တွင်လည်း ထိုစံနစ်ကိုသာ သုံးသည့်အတွက် နယ်သာလန်တနိုင်ငံလုံး သုံးသည့်စနစ်ဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းမိပါသည်။ သတ်မှတ်ဈေးနှုန်း မတူသည့်အတွက် ဈေးသက်သာသည့် နေရာမှာဝယ်ထားသည့် အချိန်များ ပိုနေ၍ အခြားနေရာ ပြောင်းရပ်နားမည်ဆိုပါက အဆင်မပြေနိုင်ဟုလည်း ယူဆမိပါသည်။
၂၀၁၈ ဩဂုတ်လ မိမိတို့၏ နယ်သာလန်ခရီးစဉ်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည့် အလည်အပတ်နေရာများမှာ -
Kerkweg 11, 8355 BL Giethoorn - နယ်သာလန်၏ ကျေးလက်ဒေသ (Amsterdam မှ ကားဖြင့်မောင်းလျှင် ၁ နာရီ ၄၀ မိနစ် ခန့်မောင်းရမည်)
Schansend 7, 1509 AW Zaandam - တိုးရစ်များ သွားရောက်လည်ပတ်သင့်သည့်နေရာ (မြို့လယ်ဘူတာကြီးမှ ကားမောင်းလျှင် ၂၅ မိနစ်ခန့်မောင်းရမည်)
သည်ဟိက် မြို့တွင်ရှိသော Madurodam ဆိုသည့် နေရာကိုလည်း အမ်စတာဒမ်မှ တနာရီခန့် ကားမောင်းသွား၍ လည်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ နေရာတခုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် မိမိရောက်ခဲ့စဉ်က ဝင်ကြေး တယောက်လျှင် ၁၃ ယူရိုပေးခဲ့ရပြီး မီးရထား၊ ဓါတ်ရထား စီးကာ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုခရီးစဉ်အကြောင်းအား http://thetoo.blogspot.com/2008/03/blog-post_29.html ပို့စ် တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း….
အမျစတာဒမျသို့ မိမိကားဖွငျ့ အလညျသှားမညျဆိုပါက ကားရပျနားမညျ့ နရောစြေးကွီးပါသညျ။ မွို့တှငျးရပျနားပါက တနာရီကို ယူရိုငှေ ၄ ယူရိုပေးရပါမညျ။ အကယျ၍ အမျစတာဒမျဘူတာကွီး၏ တဖကျခွမျးတှငျ သှားရောကျရပျနားပါက တနာရီလြှငျ ၁.၅ ယူရိုသာ ပေးရပွီး အခမဲ့ ဖယျရီတကျစီးလိုကျသညျနှငျ့ ဘူတာကွီးသို့ ရောကျသှားပမေညျ။ အခမဲ့ ထိုဖယျရီသညျ မိနဈအနညျးငယျသာ စောငျ့ရပါသညျ။ ဘူတာကွီးမှ ထှကျလိုကျသညျနှငျ့ မွို့လယျသို့ ရောကျသှားပွီး အလှနျစညျကားသော အမျစတာဒမျကို စိတျကွိုကျလညျပတျပါလတေော့။
ဘူတာကွီးတဖကျခွမျး ကားရပျနားသညျ့နရော၏ လိပျစာမှာ IJplein 4, 1021 HR Amsterdam
ဖွဈပွီး ခရကျဒဈကတျကို အသုံးပွု၍ မိမိရပျနားလို့သညျ့ အခြိနျနှငျ့ မိမိ၏ကားနံပါတျကို ထညျ့သှငျးလိုကျရပွီးလြှငျ လကျခံဖွတျပိုငျးရရှိမညျဖွဈသညျ။ ကားနံပါတျကိုသာ ထညျ့သှငျးရပွီး မိမိဝယျယူထားသညျ့ အခြိနျပွလကျမှတျထုတျမပေးသညျ့အတှကျ ကားပျေါမှာ မညျသညျ့စာရှကျကိုမြှ ထားခဲ့စရာမလိုပါ။ အမျစတာဒမျ အပွငျ အခွားမွို့ကွီးဖွဈသော Utrecht တှငျလညျး ထိုစံနဈကိုသာ သုံးသညျ့အတှကျ နယျသာလနျတနိုငျငံလုံး သုံးသညျ့စနဈဖွဈသညျဟု ခနျ့မှနျးမိပါသညျ။ သတျမှတျစြေးနှုနျး မတူသညျ့အတှကျ စြေးသကျသာသညျ့ နရောမှာဝယျထားသညျ့ အခြိနျမြား ပိုနေ၍ အခွားနရော ပွောငျးရပျနားမညျဆိုပါက အဆငျမပွနေိုငျဟုလညျး ယူဆမိပါသညျ။
၂၀၁၈ ဩဂုတျလ မိမိတို့၏ နယျသာလနျခရီးစဉျတှငျ ရောကျရှိခဲ့သညျ့ အလညျအပတျနရောမြားမှာ -
Kerkweg 11, 8355 BL Giethoorn - နယျသာလနျ၏ ကြေးလကျဒသေ (Amsterdam မှ ကားဖွငျ့မောငျးလြှငျ ၁ နာရီ ၄၀ မိနဈ ခနျ့မောငျးရမညျ)
Schansend 7, 1509 AW Zaandam - တိုးရဈမြား သှားရောကျလညျပတျသငျ့သညျ့နရော (မွို့လယျဘူတာကွီးမှ ကားမောငျးလြှငျ ၂၅ မိနဈခနျ့မောငျးရမညျ)
သညျဟိကျ မွို့တှငျရှိသော Madurodam ဆိုသညျ့ နရောကိုလညျး အမျစတာဒမျမှ တနာရီခနျ့ ကားမောငျးသှား၍ လညျပတျကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။ စိတျဝငျစားစရာ နရောတခုဖွဈပွီး ၂၀၀၈ ခုနှဈ မိမိရောကျခဲ့စဉျက ဝငျကွေး တယောကျလြှငျ ၁၃ ယူရိုပေးခဲ့ရပွီး မီးရထား၊ ဓါတျရထား စီးကာ ရောကျရှိခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ။
ထိုခရီးစဉျအကွောငျးအား http://thetoo.blogspot.com/2008/03/blog-post_29.html ပို့ဈ တှငျ ဖတျရှုနိုငျပါကွောငျး….
Posted by Thet Oo at 3:25 PM No comments:
ကိုသိန်းဖိုးနဲ့ဆိုရင် သထုံမှာတုံးကတည်းက အိမ်နီးချင်းဆိုပေမယ့် သပိတ်မှောက်တော့ စခန်းမတူကြဘူး။ တောခိုတော့လည်း သူရောက်သွားတာ
သေဘောဘိုး၊ နောက်တော့ ကျနော်တို့ မယ်တရေစခန်းကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူထောင်ကလွှတ်လာတော့ သထုံမှာ ခဏဆုံကြသေးတယ်။
ကျနော်မိသားစုနဲ့ အဝေးမှာ ရောက်နေချိန် ခလေးတွေကိုတွေ့ရင် "နင်တို့အဖေအခု ဘယ်ရောက်နေလဲ" လို့ သူမေးတတ်တယ်။ ကျနော်တို့ မိသားစု
ဥရောပကို ရောက်ပြီးမှ အမေရိကရောက်နေတဲ့ သူနဲ့ အဆက်အသွယ်ရလို့ ဖုန်းပြောကြတော့ "သက်ဦးရာ၊ ငါအမေရိကမှာ မပျော်ဘူးကွာ" လို့ ပြောတတ်သူကြီး ခုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ခေါင်းချသွားပါပြီ။
အသက် (၇၀) မှာဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းကြီးရေ ...
ကျနော်သေရင်လည်း "ဦးသက်ဦး ၊ အသက် ( ) ၊ အိုင်တီစီ (ဆင်တဲ) ၁/၇၉ ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ အထွေထွေသပိတ်ကော်မီတီ
(သထုံမြို့) လို့ စာတမ်းရေးဖို့ သားသမီးတွေကို မှာခဲ့မယ့်အကြောင်းပြောရင်း နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေဗျာ...။
ကိုသိနျးဖိုးနဲ့ဆိုရငျ သထုံမှာတုံးကတညျးက အိမျနီးခငျြးဆိုပမေယျ့ သပိတျမှောကျတော့ စခနျးမတူကွဘူး။ တောခိုတော့လညျး သူရောကျသှားတာ
သဘေောဘိုး၊ နောကျတော့ ကနြျောတို့ မယျတရစေခနျးကို ရောကျလာခဲ့တယျ။ သူထောငျကလှတျလာတော့ သထုံမှာ ခဏဆုံကွသေးတယျ။
ကနြျောမိသားစုနဲ့ အဝေးမှာ ရောကျနခြေိနျ ခလေးတှကေိုတှရေ့ငျ "နငျတို့အဖအေခု ဘယျရောကျနလေဲ" လို့ သူမေးတတျတယျ။ ကနြျောတို့ မိသားစု
ဥရောပကို ရောကျပွီးမှ အမရေိကရောကျနတေဲ့ သူနဲ့ အဆကျအသှယျရလို့ ဖုနျးပွောကွတော့ "သကျဦးရာ၊ ငါအမရေိကမှာ မပြျောဘူးကှာ" လို့ ပွောတတျသူကွီး ခုတော့ မွနျမာပွညျမှာ ခေါငျးခသြှားပါပွီ။
အသကျ (၇၀) မှာဆုံးသှားတဲ့ နိုငျငံရေးအကဉျြးသားဟောငျး၊ ABSDF ရဲဘျောဟောငျးကွီးရေ ...
ကနြျောသရေငျလညျး "ဦးသကျဦး ၊ အသကျ ( ) ၊ အိုငျတီစီ (ဆငျတဲ) ၁/၇၉ ၊ နိုငျငံရေးအကဉျြးသားဟောငျး၊ အထှထှေသေပိတျကျောမီတီ
(သထုံမွို့) လို့ စာတမျးရေးဖို့ သားသမီးတှကေို မှာခဲ့မယျ့အကွောငျးပွောရငျး နှုတျဆကျလိုကျပါတယျ။ ကောငျးရာမှနျရာ ရောကျပါစဗြော...။
Posted by Thet Oo at 6:13 PM No comments: